Sony, Samsung & Other Technology: Play Store ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ FREE APK ဖိုင်တွေကို Computer ကနေဒေါင်းလုပ်ရယူကြမယ်
Play Store ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ FREE APK ဖိုင်တွေကို Computer ကနေဒေါင်းလုပ်ရယူကြမယ်
Play Store ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ FREE APK ဖိုင်တွေကို Computer ကနေဒေါင်းလုပ်ရယူဖို့အတွက်
Play Store ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ Free APK ဖိုင်တွေကို Download လုပ်ဖို့ဆိုတာ Android ဖုန်းတစ်လုံး မကိုင်ထားတဲ့ သူတွေ အတွက် ဒါပာာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက် ဒီနည်းလမ်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သိတဲ့သူတွေ ကကျော်ဖတ်သွားကြပါ။ မသိတဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ အင်တာနက်တစ်ခု ရှိရုံ နဲ့တင်ရနေပါပြီ။ ဘာ Software မှ ထပ်ပြီးတော့ Install လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Internet Download Manager နဲ့ ဒေါင်းရင်တော့ ပိုမြန်တာပေါ့နော်။ IDM သွင်းထားပြီးသာ သူဆိုရင်တော့
(၁) IDM ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
(၂) စက်ဘီးပုံလေးနဲ့ Options ထဲဝင်ပါ။
(၃) File Types ဆိုတဲ့ Tab အောက်မှာ Automatically start downloading the following file types ဆိုတဲ့ အောက်မှာ Extention တွေ အများ ကြီးထဲက နောက်ဆုံးမှာ Space Bar လေးခြားပြီး APK ဆိုပြီး ရိုက်ထည့် ကာ OK နှိပ်ပြီး ပြန်ထွက်လိုက်ပါ။
ပြီးသွားရင်တော့ အောက်က အဆင့်တွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
အရင်ဆုံး "https://play.google.com" ထဲကို Browser မှ တစ်ဆင့် ၀င်လိုက်ပါ။ ရိုက်ရမှာပျင်းရင် အောက်ကပုံကို CLICK.
ပြီးသွားရင်တော့ အောက်မှာက Note2ရဲ့ Live Wallpaper ကို အစမ်းဆွဲပြမှာပါ။
အဲ့တာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ အောက်ကပုံအတိုင်း ကျလာပါမယ်။
အဲ့ဒီ့က URL ကို Copy လုပ်လိုက်ပါ။
Copy လုပ်ပြီးရင်တော့ Browser မှာ "http://apps.evozi.com/apk-downloader/"ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပါ။ ရိုက်ရမှာ ပျင်းရင် အောက်က ပုံကို CLICK
အပေါ်ကပုံအတိုင်း Paste Here ဆိုတဲ့နေရာမှာ ခုနက Play Store က Copy ကူးလာတဲ့ URL ကို Paste လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Generate Download Link ကိုနှိပ် ပြီး ခေတ္တစောင့်ပါ။ File Size ပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။
ဒီလိုပုံလေးပေါ်လာ ရင်တော့ Click Here to Download _____ now ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ရင်တော့ IDM နဲ့ စတင် Download လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ Play Store က APK တွေကို ဒီနည်းလေးနဲ့ အဆင်ပြေပြေ ကွန်ပြူတာက နေဒေါင်းလို့ရပီပေါ့...
Galaxy Note3(SM-N900) ကို Original မြန်မာစာစနစ် ...
Android OS ကို လက်ရှိသုံးနေတဲ့ PC မှာသုံးကြမယ်
Plants vs Zombies2(APK + DATA) For Android *ENG ...
Android 1.6 မှ 4.4 ထိ အလုပ်လုပ်သော Smart Zawgyi3...
MEGA မှ ဖိုင်တွေကို Downloader သုံးပြီး Download လ...
Huawei C8813,C8813D မှာ Firmware Downgrade လုပ်ရင်...
Play Store ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ FREE APK ဖိုင်တွေကို Co...
Internet Download Manager For Android v7.7.2
Despicable Me2(2013) ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ (3) Mini-Mov...
Despicable Me (2010) ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ (3) Mini-Movie...
Xperia Z Ultra C6802 (Build 14.1.B.2.257) Firmware...
Redsn0w ကိုအသုံးပြုပြီး iOS 6.1.3 ကို Jailbreak လု...
Evasi0n Jailbreak Tool (Version 1.5.3 New Update) ...
ZUMBA DANCE (APK+DATA) For Android
Xperia Z (C6603) ကို Official 4.2.2(Jelly Bean) Bu...
Latest iOS Firmware Collection for iPhone
Galaxy S2 (GT-I9100) Official Firmware Collection ...
Xperia ဖုန်းတွေအတွက် Firmware ကို Flash လုပ်ဖို့ F...
SSOT Direct Watch & Offline Reading (APK) For Andr...
Xperia Ion (LT28h) ကို Android 4.1.2 Jelly Bean 6....
Galaxy Grand CDMA (SCH-I879) ကို eSurfing Logo မပါ...
Samsung Galaxy Ace2(GT-I8160) Official Firmware...
Galaxy S3 (GT-I9300) ကို Android Version 4.0.4 လို...
Galaxy S4 (GT-I9500) ကို Official firmware Jelly ...
Mr. Phyo Chan လက်စွမ်းပြထားတဲ့ 4.1.2 MMSD Google A...
စက်ရုပ်သမားများအတွက် DR.Fone for Android (FULL VER...
ပန်းသီးကိုင်ဆောင်ထားသူတွေအတွက် DR.Fone for iOS (FU...
Galaxy S4 (GT-I9505) ကို ကိုင်ဆောင်ထားသူများ အတွက်...
V-Root Version 1.7.1 with Myanmar Language
RedSn0w ဖြင့် iOS 6.1.3 ကို Tethered Jailbreak လုပ...
Android တွေအတွက် လိုအပ်နိုင်မယ့် AndroiD USB DRiV3...
Huawei C8813 B175 4.1,Emotion UI official Firmware...
Xperia Z1 (C6902) ကို Official Jellybean with Buil...
Xperia Z1 (C6903) ကို Official Jellybean with Buil...
Smart Zawgyi One Click Myanmar Font Tool (Android ...
စက်ရုပ်သုံးသူတွေ အတွက် FACEBOOK (version 3.8)
Huawei C8813 နဲ့ အခြား ဖုန်းတွေမှာ အဆင်ပြေစေနိုင်မ...
Computer PC ပေါ်မှာ Android Application File (.apk)...
Android ဖုန်းတွေအတွက် PC Suite သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့ MO...
Xperia S (LT26i) ကို Official 4.1.2 with Build 6.2...
Galaxy Mega 6.3 (LTE) (GT-I9205) ကို Official 4.2....
Galaxy Tab 3_7.0 (SM-T211) ကို Official 4.1.2 Firm...
Galaxy Note2(4G LTE) GT-N7105T ကို Official 4.1....
Root Explorer for Android v2.14.2
Galaxy S4 ZOOM (SM-C101) ကို Official Jellybean 4....
Galaxy Note3 (SM-N900) ကို Official 4.3 Jellybean ...
Galaxy Note 10.1 (N8000) ကို Official 4.1.2 Latest...
Xperia Z (C6602) ကို Official 4.2.2 with Build 10....
Galaxy Note3SM-N9005 (4G LTE) 4.3 Jellybean Offi...
Galaxy S4 GT-I9505 (4G LTE) အတွက် Leaked Test Jell...